लभस्टोरीको प्याकेज ‘लिलिबिली’
भरतपुर, चैत १२ । प्रायः नेपाली फिल्मलाई एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ, त्यो हो ‘लभस्टोरी’को आरोप । फिल्ममा सामान्य नायकनायिकाबीच लभ देखाउने, अनि आफ्नो फिल्मलाई भन्ने ‘विशुद्ध लभस्टोरी’ । अहिले कलिउडमा अर्को शव्द घुसेको छ ‘अर्गानिक’ । फिल्म निर्माता तथा निर्देशकहरु आफ्नो फिल्म ‘अग्रानिक’ बनेको बताउँछन् । ‘भल्गर सिन’हरु दिन पछि नपर्ने निर्माता निर्देशक पनि आफ्नो फिल्म अर्गानिक बनेको दावी गर्छन् ।
चैत ३० गतेबाट नेपाली दर्शकले अर्को एउटा लभस्टोरी फिल्म पाउँदैछन्, ‘लिलिबिली’ । झट्ट सुन्दा अनौठो लाग्ने नाम । ‘लिलिबिली नाम नै ‘क्याची’ छ, पहिला हामीलाई पनि अनौठो लागेको थियो । पछि यही नाम नै ‘क्याची’ लागेर फाइनल ग¥यौँ’ निर्देशक मिलन चाम्सले भने, ‘फिल्म लभस्टोरी नै हो, तर फरक स्वाद छ ।’ कस्तो स्वाद हो त लभस्टोरीको ? सबै कुरो खुलाइयो भने त कहाँ दर्शक हलसम्म पुग्छन् र ! त्यसको लागि चैत ३० गते कुर्नुपर्छ । कुरेर मात्र कहाँ हुन्छ ? टिकट काटेर हलभित्र छिरेर फिल्म हेर्नैपर्छ ।
वैशाख १४ गते रिलिज गर्ने भनिएको चलचित्र हो यो । तर छिटै दर्शकसामु आउने भयो । पछिल्लो समय स्टारको उपनाम पाएका प्रदीप खड्का र सफल अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको दमदार अभिनय छ ‘लिलिबिली’मा । नायिका प्रियंका कार्कीको सस्पेन्स भूमिका छ । अर्का अभिनेत सविन श्रेष्ठको अविनय पनि अव्बल छ । निर्देशक चाम्स फिल्मलाई त्रिकोणात्मक भन्न रुचाएनन् । उनले फरक स्वादको लभस्टोरी मात्र भने ।
फिल्मको दुई गीत यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकिएको छ । गीत दर्शकको गीतमा झुण्डिएको छ । फिल्म हिट हुनलाई गीत हिट हुनुपर्छ । यस फिल्ममा रहेका चार गीत सुन्दर छन् । फिल्मको लोकेशन विदेशको बढी छ । छायांकन दमदार छ । कलाकार जमेका छन् । नायिका जसिता गुरुङले यही फिल्मबाट डेव्यु गरेकी छन् ।
सुपर नायक प्रदीप खड्काको यो तेस्रो फिल्म हो । उनले यसअघि प्रेमगीत र प्रेमगीत २ मा आफ्नो कला देखाइसकेका छन् । उनी भन्छन्, ‘फिल्ममा मिहिनेत धेरै छ, मैले अभियन गरेको यो फिल्म सुपर नयाँ डेव्यु बन्न सक्छ । यसअघिको मेरो हिट फिल्म (प्रेमगीत) लाई जित्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’
प्रदीपको अपोजिटमा देखिएकी जसिता फिल्मप्रति बढी विश्वस्त देखिइन् । उनले भनिन्, ‘दर्शकले मन पराउने खालको फिल्म बनेको छ, मेरो डेव्यु फिल्म हो, दर्शकले मन पाउनेमा म त आशावादी छु ।’
‘लिलिबिली’ रोमान्स, प्रेम, विछोड र एक्सनको प्याकेज हो । स्कटल्याण्डसँगै नेपाल, लन्डन र टर्कीको स्थानबुलमा छायांकन गरिएको हुनाले पनि यस फिल्मको मार्केटमा चर्चा छ । निर्देशक चाम्सले कथाले मागेपछि नै फिल्मको छायांकन विदेशमा गर्न परेको बताए । चलचित्रमा मनिष श्रेष्ठ, धुब्र दत्त, रितेस चाम्सलगायतका कलाकारले अभिनय गरेका थिए ।
यस फिल्ममा नेपाल आइडलका प्रताब दासले पनि श्वर भरेका छन् । फिल्मको प्रचारको लागि सोमबार नारायणगढ आइपुगेको टोलीमा दास पनि थिए । टोलीमा प्रियंका कार्की थिइनन् । सोमबारै फिल्म टोलीले कन्सर्ट पनि देखाएको थियो ।